New Zealand attack: tsanangudzo yekugadziriswa kwenyika yose, kusagadzikana kwevanhu uye kuparadzanisa: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 18 March 2019	• 29 Comments
Kana kushorwa kweBrenton Harrison Tarrant kuKristuchurch muNew Zealand haisi PsyOp, zvino inoshumira guru guru zvakanaka. Censoring the zvinonzi zvichirarama mifananidzo, vachikakavadzana kuti inogona kupa vanhu vakawanda pfungwa yekuita kurwisana, isfa yakakwana yepasi rese social media censorship kuti ave chimiro. Iwe unganetseka kuti ndiani ari kutarisa kurarama kwakadaro kurarama zvachose? Ko changamire akazvizivisa mu Facebook shamwari shamwari dzake? Hazvishamisi kuti vanhu vanoda kuona zvifananidzo mushure mezvo, nokuti chii chine mishandisirwo yezvinobudiswa kwemashoko kwemakore pavanotiratidza mifananidzo yehondo kana kutya? "Kurwisa" kwaivawo chikonzero chakanaka che kubvisa zvombo zvevanhu kupinda. Pakupedzisira asi kwete zvishoma, zvinowedzera zvakanyanya pakukurukura pakati pevanhu vari kuruboshwe uye vakarurama uye vechitendero, sezvinotsanangurwa ichi chinyorwa.
Tirikuona script inofanirwa kuisa nheyo yehurumende yenyika yose. Hurumende yenyika ino inotarisana nechitendero chimwe chenyika, imwe yerudzi uye rumwe rudzi. Izvozvo zvichaitwa kuburikidza nezana rekare reRoma 'Ordo ab Chao' (kurongedza kunze kwechikonzero). Nokuda kweizvi, huwandu hwepasi pose hunofanira kutanga hupfuura nehondo yechitatu yenyika (maererano neshoko), umo mune zvechitendero zvinonyanya kukosha. Uprofita hwezvitendero zvenyika huru hunoita basa rinokosha pane izvi. Imwe nguva hondo yeJerusarema yapera, nyika yevanhu vose ichaita yakaneta uye ichizovhiringidzika uye inobvuma itsva itsva yaLuciferian UN. Nokuda kweizvi, kupesana kwechitendero kunofanira kutanga kucheneswa. Nhamba yangu yekufungidzira ndeyokuti chitendero cheIslam chichawana simba. Ndinotenda kuti Turkey ichaita basa rinoita izvi kuburikidza nekumutsa Umambo hweOttoman. Panguva imwecheteyo, tichaona simba reU.S. chena. Ndinodzokorora kana ndakatsanangura iyo yose shanduro (script) zvakare, saka ndinokutumira kwauri kune mamwe mashoko ichi chinyorwa.
Kunyange zvazvo hurukuro iyi huru inoramba ichitinhira, isu zvino taona kuti webhu rwenyika yose (internet) iri kuvhara zvakanyanya. Maitiro ekutsvaga kwemasangano makuru ehurumende (Facebook, Google, etc.) akaitwa akajeka neNew Zealand "kurwisa" mu 1. Hapana munhu anogona kuzvidzivirira uye nekuda kwe "kurwisa" kwakadaro kunokonzera mafungiro makuru, takaonawo uchapupu hwekuti chirevo che "Dambudziko, Reaction, Solution'inoshanda mukukudzwa kwayo kwakakwana. Munguva yakapfuura, vhidhiyo vakabvumidzwa kuratidza mavhidhiyo evhidhiyo ekuponda kwaJohn F. Kennedy, kurwiswa kwe911 kana kuve kuveura musoro, pasina kutaurirwa kuti izvi zvinogona kukurudzira vamwe. Zvisinei, huwandu hwemagariro evanhu iye zvino hunoti pasina kurwisana kana kodzero yekuongorora nyika yose yezvifananidzo zveNew Zealand. Mifananidzo iyo nenzira inogona kumutsa mubvunzo wekuti tiri kutarisana nenhema yakadzika pano.
My Vimeo channel yakavharwa mukati memasekondi mashomanana ekuisa mifananidzo, asi pamusoro pezvose zvandaida kuratidza kuti zvinoshamisa sei mifananidzo uye kuti yakafanana sei fake yakadzikanokuti iwe hausi kuona chero ropa chero ripi kana kupindira kwebhuruti mumasvingo. (verenga zvakawanda ..)
Uye mushure mekunge "kurwiswa" kwevanhu vose kuwira mukutya, kusuruvara kana kutsamwa uye kuburitsa kuri kuputika, nhepfenyuro yekudarika uye kutengesa kunoenderera mberi. Kunyange zvazvo kukakavadzana pakati penyika dzakadai seU.S., Russia, Turkey, China uye zvakafanana zvichiita sezviri kuwedzera, nyika idzi dzose dziri kushanda pakutanga kwe teknolojia iyo inogona kuunza vanhu muuranda hwejeri. Izvozvo ndezvokuti nyika dzose dzinorwisana mumunda unooneka dzinoshandisa nzira imwe chete iri shure kwezviitiko. Iyi kuisa pachena mumunda unooneka kunokosha chete pakukwanisa kupedza tenzi huru script. Izvi zvinogara zvichiitwa kuburikidza nehondo pakati pemapoka akafuridzirwa uye kuburikidza nenzira yeuporofita hwechitendero, nokuti izvi zvikamu zveiyo script script. Icho chinangwa chikuru, zvisinei, ndechokuunza vanhu pasi pekutonga kwaLuciferian. Vanhu vanofanira kushamwaridzana neInternet neuropi uye muviri kuitira kuti pakupedzisira vawane zvisingabviri. Chimiro chaMesiya chinotarisirwa kubva kune zvitendero chichidave chichibvawo kubva "mugore" (funga nezveHuwandu hwechokwadi, ona pano en pano kune zvakawanda).
Ndinonzwisisa kuti izvi zvose zvinogona kunge zvakaita seabracadabra kwauri, asi zvakakosha kudzidza chirevo ichi nokuti icho icho ndiyo iyo makambani makuru makuru ezvekombiki (avo vakagamuchira ikozvino chiyero chekugadzirisa kwekupedzisira) vari kutevera. Vanoedza kutapurirwa kwevanhu uye zvisizvo. "Chii Kuchinja Kwemhepo? Izvo zvisiri izvo?Ndinonzwa iwe uchifunga. Hungu, kutumisa uye kusina. Zvakakosha kunyora izwi iri. Kuchinja kwezvematongerwe enyika panguva iyo kunotevera zvinyorwa zvechitendero mumhanyi-kusvika kuhondo huru yeJerusarema, asiwo kushandisa mitemo inokonzera kutumira uye kudarika. Zvisikwa zve5G mitambo; kuisa DNA databases; kuiswa kwechikonzero chekudzivirira chirwere; kusundira mutemo we transgender; ivo vose vanozvipira kune zvakanyatsorongwa (ona pano en pano). Saka ivo vose vanofanira kuidana kuti 'tenzi script', sezvandinowanzoidzaidza. Ini saka ndinokurudzira ichi chinyorwa nyatsoidzidza, kuitira kuti iwe uone kuburikidza nemufananidzo mukuru. Tora dambudziko kuti uverenge zvinyorwa pasi pemisungo yebhuruu kuitira kuti tenzi wechikoro ave pachena kwauri.
Dai chete taigona kugumisa kuti vanhu vakawanda uye vakawanda vakaziva kuti nyika yose kuburikidza nevanhau mune mutsa Trumanshow rakabatanidzwa muchokwadi, apo vanhu vazhinji vari kutambidzwa kuburikidza nekurwiswa kwemashoko kumapoka emadhora evanhu. Zvino iyo inogona kunge yakamira. Polarization inzira inofadza yekuumba mhirizhonga. Pane imwe nguva kune mhirizhonga, kudanwa kwekupindira ne "ruoko rune simba" kunobuda kamwechete. Chero kana vanhu vatanga kuona kuti zvinhu zviri kutorwa zvinogona kudzivirirwa uye script inoderedzwa.
Tags: kurwisa, Brenton, censorship, christchurch, masimba, Facebook, Featured, pfuti, Harrison, kurarama, vezvenhau, itsva, polarization, mumagariro, chikova, Tarrant, kutya, kugandanga kwegandanga, Video, yakanyorova, mutemo, YouTube, Zeeland
Hatifaniri kukanganwa kuti tinorarama panguva imwechete saNowa. Yakawanda ichiri yakachena kubva kuDNA, zvishoma isu hatisati takasanganiswa ne teknolojia. Iwe unogona kutambisa zvaunoda kuti mafashamo auye asi vanhu vazhinji vanoramba vachiseka.
Vanhu vari muno muNew Zealand vakapindura zvakanaka, havana kuterera kune zvakaipa uye vakajekesa kuti hatisi kudaro. Kune rumwe rutivi, hapana chinoratidzwa pamashoko pamusoro pevaKristu vari kuurayiwa muAfrica kana kana Israeri achiparadza vaPalestine.
Zvikoro zvinoudzwa kuti zvirege kugovera mafirimu nokuti zvinotyisa kana kuti zviri nani kuti usateerere mutambudzi. Haitauri kutamba foni kana basa kana mavhiki maviri zvakare. Hazvitauri kuti mhirizhonga yakashata paNedflix haisi yakanaka yepfungwa. Hungu asi izvo zvisingatauri zvino, hongu tinoziva nhasi zvakanaka chaizvo izvo chaizvoizvo uye zvakashata.
Mukuwedzera, zvinogona kunge zvakare kuti nguva iri muNew Zealand iri (kuwa) nguva yekukohwa. Vanhu vanonzwa vakaora mwoyo zvikuru mushure mevhiki rino, iwe unogona kutarisa kuti simba rakawanda sei izvi zvakagadzira, zvose zvakanaka uye zvisina kunaka. Vane gumi nemana (mararamiro akadzika kwazvo) kunyanya vanoramba vachipo nekuda kwezvose manzwiro ekutsiva izvo zvakagadzirwa. Chero bedzi idzi dzichidyiwa, nyika inoramba ichitsvaga muhurumende sezvinoita iye zvino.
Pane chifukidziro pamusoro peamai pasi, saka vakadzi vari pasi pano vanofamba-famba vachipoteredzwa, hapana kusiyana pakati pezvitendero.
Asi isu tiri iye zvino munguva iyo machira ari kutanga kuparara uye ndiri kutanga kutarisa kakawanda kuti nguva dziri kuchinja. Ndicho chikonzero zvinhu zvose zviri kufamba zvakasimba nokuti nguva yekare yekare iri kupera.
Ndinoda kuti vafare zvikuru nenyika itsva yer digital, ndinoziva kuti ngarava kana areka yakadzika. Ndicho chikonzero ndinofunga kuti uri kutaura nezveTurkey!
Handiiti chikamu, ndinongouya kuzocherechedza 😎
Kuburikidza neshamwari dzechiKristu ndakagamuchira zviitiko zvekurwisa muNigeria neEgypt. Kana ichokwadi, vazhinji vakawanda vanopfurikidza kupfuura NZ. Ndakanga ndisati ndakuona mumashoko acho, angave ari mhosva yangu.
Nyeredzi dziri kuenda kupa NZ mari;
Kufungisisa kana vachizopawo mari kuNigeria neEgypt.
Ok, ndinoziva kuti ndeyekunyengera uye Martin haana kufara.
Asi iyo nyika yevaranda haisisiri yakanaka. Vave vari panhandare nhasi iyo isina kutora maminitsi 66 !! Kuziviswa pamusoro pazvo kwakatora nguva yakareba. Ndeipi maminitsi e66 zvino? Sezvo 'hurumende', uri kuzviita benzi nekufamba nenzira yakafanana nehurumende. Sangano rinoda mari yekuti 'yakanaka'. Zvakanaka uye zvisinganzwisisi izvo zvino zviri 'zvakanaka'. Ingosimbisa zvakasimba zvinodiwa uye enda nayo. Kana zvichidikanwa, rega 2 kwemwedzi nenguva. Asi hongu varanda havatyi. Vari kuita. Nyika yeNetherlands ine muromo mukuru kune dzimwe nyika. Zvakanaka, zvingave zvakasiyana sei, nokuti kune vanhu vanorarama, avo vanowanzopomerwa, vanyengeri, avo vari mubasa rebasa, vanobata nzvimbo dzinokosha.
Zvinogona kuva nguva iwe unogadzirisa 'regime shanduko' mantra mushure mekunge maverenga tenzi script. Ipapo iwe uchaona kuti hurumende inogona kugadziriswa chete nemweya yekumuka uye saka zvakakosha kutsanangurira vanhu vakawanda sezvinobvira kuti mutambo unoitwa sei. Iwe haugoni kusvika ipapo nechinangwa chezvematongerwe enyika chete.
Ndinokutendai Martin. Iyo nyanzvi yekunyunyuta inokonzerwa nekuva nesimba uye kuwana simba rakawanda nekudzivisa vanhu vevanhu vakawanda. Vanoita uye vanogona kuita izvi nokuti vane simba mune zvematongerwe enyika, vezvemitambo, nezvimwewo munozvitumidza. Saka ivo vari munzvimbo dzakakosha uye havazozvipira kusiya. Ndicho chikonzero ivo vanoshandisa zvose. Kana iwe uchida kuita kuti izvi zviitike, mune maonero angu ekuzvininipisa izvi hazvigone kuitika nokuva 'kuziva'. Vanongoseka chete izvozvo. Mukuwedzera, iwe kazhinji unoona kushorwa kunodzorwa kwakagamuchira izwi rokuti 'kuziva'. Akachenjera zvikuru, nenzira. Pakupedzisira pane zvekuita, haugoni kubvisa chigumbuso nekuziva .. kuziva kana kushandiswa kunongonzwisisika kana iwe une simba uye une zvigaro zvekufungidzirwa uye kushandiswa kwekuziva, kuunza vanhu kumagariro avo anowanzofungidzirwa kugadzirisa. Tingabvumirana here kuti tisabvumirana?
Tinogona asi ini ndinofunga kuti chiito chacho chichauya zvirokwazvo kana iwe uchiziva kuti ndiani ari kutonga kwehupenyu hwako (mweya wako). Iwe uchazozvidza script uye hauchazopi kutamba mutambo (kuenzanisa) maererano nemitemo. Izvi zvinotungamirira, somuenzaniso, kurambwa kwechitendero, maparamendi ekupedzisira neakarurama kana, nenzira yakakodzera, kuti asachazoita mabasa mukati megadziriro (sekuita mubasa). Izvozvo zvinofanira kuitika muhukuru, asi pamweya wepamusoro tinogona kudzokorora / kutengesa zvinhu (kubva pakatarisa kwepakutanga umo mweya uripo)
Kuti izwi rokuti "kuziva" rakapambwa nemamwe mavara ehurumende, ndinobvumirana newe.
Ndinokutenderera nzvimbo kana kuti zvinyorwa zvehurukuro.
Zvakanaka chii chiri kuitika ikozvino. Tarrant inoratidzika sokunge iye
inomiririra boka rakasiyana. Izvi zvinenge zvichiitwa nemaune avo vanowanzofungidzirwa, vanyengeri vemauto, kuisa mararamiro uye kusaisa rimwe boka rimwe chete naye uye nokudaro vanogona kupinda mumutemo wekufungidzira. Mukuwedzera, vanyengeri vane utsinye havanzwisisi kuti Tarrant haana kusarudzwa kana kusarudzwa kuti amiririre boka rakasiyana. Kana Tarrant angadai akaita chimwe chinhu, aizongomiririra iye oga uye hakuna mumwe.
verenga nyaya ino zvakare mumamiriro ezvinhu aya:
johan the hague akanyora kuti:
Zvechokwadi, zvose zviri nyore.
Nguva dzose zvigadzirwa zvakashandiswa kushandiswa kwezvombo uye saka zvakashandiswa pakudzingwa kweavo vatongi vanofunga kuti zvinofanira kubviswa.
Icho chaiva huni, pfuti, simbi, matangi, ndege, zvombo zvenyukireya, asi ......
Ipapo iyo internet yakauya.
Kuregererwa ne fakenews, kutengesa mari yakakurumidza, kuparara kwehupenzi, guru mukamera kamera yekuongorora, magandanga ekurwiswa kwemafaro, uyezve kuwedzera kudzivirira rusununguko.
George Orwell aisafungidzira izvi. Ichi ndicho 1984 asi nguva 1000 yakaipisisa.
Internet chipo chevanhu vezvematongerwo enyika vane uori / mabhengi uye kune dzimwe nyika.
Uye mutongi wenyika haazvioni iye pachake, achabvisa mamiriro okunze.
Hapana chinobatsira kupikisa izvi zvakare.
Iva akanaka kumhuri, shamwari neshamwari uye rega Mwari akupe mhinduro
Akadzidziswa neIrael Secret Secret Intelligence Service ..
Isu tine jaya rimwe chete, makore gumi nemana 28, mudzidzisi wepanyama ane matani emari yakagara nhaka, uyo anofamba nyika, anotora zvinhu zvose, anodikamwa nemunhu wose, saka zvinoshamisa zvinotanga kuuraya munhu oga.
Zvatinazvo chaizvo ndeye muurayi akadzidziswa, wemakore e42, kubva kumhuri yechiJudha, uyo akadzidzira kurwisana nePalestine uye akashumira kuSouth Siria neIdlib neAl Qaeda, achienda nekubuda muTurkey.
Vakadzi vechi4 "vatashanyi" vakabatsira "kubata nekugadzirisa zvinhu" uye mapurisa anopesana nehugandanga ezvo akatapa wechipiri shooter.
Munguva yake nyika inofamba se "murume wechidiki ane wanderlust," hatina varaidzo. Hatina mifananidzo yechikoro, hapana nhoroondo yebasa, hapana dzidzo, hapana nhoroondo yebasa, mumwe "munhu asina chinhu" saSyy Hook "shooter" nevamwe vakawanda.
Panguva ino yakaita chikanganiso chekuyambukira munzvimbo dzakatariswa nehurumende yeRussia neSyria, apo VT inogamuchira zvinyorwa zvepachena zuva rega rega. Vanomuziva, shure kwezvose, aifanira kuva Mutungamiri Assad. Oo? CNN yakakundikana kutaura izvozvo?
Dambudziko reVV rinowanzotanga kufunga Bhenhema Dzenhema panzvimbo yekunyengedza, ndiyo pfungwa yangu.
Kana pane vakaroorwa chaiwo, hama dziripo (kazhinji vanaamai) dzichada dombo rezasi. Kunyangwe zvinotora makore.
Zvakanaka mb, iyo ndiyo nheyo, vanaamai chaiye (madzibabawowo) vachashandisa nzira dzose kuti vazive, havazoregi zuva richifamba pasina kushungurudza zviremera etcetera. Icho ndicho chinangwa.
Mune mhedzisiro, vateereri vanonzi vachidanidzira paTV neRadio chete, uye zvino zvinoratidzika kune vanhu vose kuti nhengo dzemhuri dziri kupenga. Vhidhiyo vane simba
Nebhokisi remanyepo Hapana chakafanotaurwa uye zvinhu zvoupenzi zvinogona kuitika kuhama kana paine mhombwe, vane 'zvose' mumaoko avo, zvakanyanya kuvimbika
Erdogan, 'super-muslim', anoitawo mutambo nehama dzake dzekuEurope kumavirira nokuratidza kutyisidzira. Nenzira, akambomira akareba mumagazini ye Time here? Vose vateereri vachishandisa script imwe chete vanoita chimwe chinhu apo isu tisingafungi tapa mvumo. Isu tinotungamirirwa nevakuru vevamwe, vari kunze, uye izvi zviri kuitika pasi rose. Vanovanza izvi kubva kuvanhu vakawanda. Izvi zvinoshandawo kune vanhu vakawanda veTurkey. Chitendero senzira yekudzvinyirira.
@zalm, ndinofunga kuti VT article iri pedyo nechokwadi..Christchurch inonzi known Mossad playground
Mossad spy ring 'yakafukurwa nekuda kwekudengenyeka kwaKristuchurch'
Basa rekusungirirwa kweIsraeli kuMossad rakapomerwa kana kuita sangano rekuchenjera-kuungana muNew Zealand iro rakazarurwa nekuda kwekudengenyeka kwenyika kwaFebruary kweChishanu.
Zvinoshamisa kuona kuti zita rokuti mossad riri kuramba richiwa panguva dzose dzemhando dzekufambisa mapepa funga nezveFOX nhepfenyuro mushure mokunge 9 / 11 pamusoro peAmdocs, Comverse etc
Kamwe zvakare chimwe chiitiko, kaviri kakaitika, katatu nenzira.
Vanokandawo zvinyorwa kana vasingabvumirani newe.
Ndinonzwisisa kuburikidza nemhizha kuti imwe Tarrant inosungwa muNew Zealand nokuda kwekurwiswa. Ndakanyatsonzwisisa kuti hapana chinyorwa chinobudiswa apo chakanyatsogadzika ??? Kudana kumusoro kwemibvunzo. Hazvikwanisi kusarudzwa kuti kaviri iri mujeri kana kufungidzira kuti Tarrant iri pahombe nekambani yakanaka muruoko rwake. Zvino unowana hutsva hutsva uye hunongoramba huchiripo. Kufamba nenyika yose.
Nemavhidhiyo mavhidhiyo emufaro iwe unogona kungoita vanhu vasipo
Ndizvozvo, iwe wakazvijekesa pane yako yepaiti. Vhidhiyo ye 'yepakutanga' yeTarrant inogona kusaratidzwa muNew Zealand, mhosva. Vakatanga kuita zvinhu zvose muhomwe yekuyeuka zvakanyangarika. Zvakanetseka zvakanaka pamusoro pe "chokwadi" hazvikwanisi kuitwa. Tinofanira kutenda "chokwadi." Icho chitendero chete.
Vanoshanda nemitumbi miviri, zvinyorwa zvisiri izvowo, iyo ndiyo nyika yekunzwisisa, saka mavhidhiyo asina kunaka, maitiro emagetsi echinyakare ona, kureva fake IVE mavhidhiyo asina musoro akabudiswa naBell Pottinger. Asi zvakajeka ndezvekuti sangano reZionist mukati mekuchenjera kwenyika rakapa kuenderera mberi kwekushandisa kusabatanidzwa uye kutonga, kunyanya pakati penharaunda yeIslam neZionism, kusanganisira evhangeri dzevaKristu. Nzvimbo Christchurch iri kuudza ..
Mitsva yakawanda iyo vanhu vanowana mari kune zvinyorwa pa Facebook nehukama pamusoro pekurwisa.
Hapana kugoverwa kunobvumirwa kuitira kuti usabhadhara kune mutadzi. Mitero, mitongo yejeri uye yakafanana inogona kupiwa kushumira huru huru.
Chaizvoizvo hachina chokuita neumwe. Vanonyanya kuvhiringidzika nevarume vasina kuita musarudzo vanoita izvi 👽
Mharidzo yekutanga kumariro NZ, iyo nyaya inotaura nezve 30 yakakuvara (?).
"Kuurayiwa kwechisarudzo chechikwata cheChishanu chekupedzisira kwakadhura vanhu ve50 kusvika ikozvino. Mumwe munhu we30 akakuvara. Anonzi aipomerwa mhosva - anonzi 28 ane makore ane makore makumi maviri nemashanu anobva kune imwe nyika anobva kuAustralia - ari mujeri risati rasungwa. "
Yakaenda nehutachiona iyo kupfura kwakauya se "fake" kana "fake", iyo inofanirwa kunge iri iyo iyo iyo yakave iyo iyo yakaerekana yawira mumudengu. Ndiyo yechipiri yeWorld's 1 yekuongorora kukuru, woow, uye unoenda kujeri kana iwe uchigovera mavhidhiyo?
Uye zvakare yakatsanangurwa pasi apa
ona YT film ne tsanangudzo mushure mokutaura ...
Bill Wagner1 zuva rapfuura
Zvisizvo izvi ndeye psyop. Nguva yejeri yekuparidzirwa kana mifananidzo ndeyepfuti inopfungaira.
Ona 16 mhinduro
chad calderone1 zuva rakapfuura
Devin Nunez akachera $$$ mhosva dzinotangira w / Twitter.
genesis7771 zuva rapfuura
Chikonzero nei ivo vari kutyisidzira vanhu kana vakabatwa uye izvi ndizvo zvose zvavanopandukira. Apa ndipo patiri isu nhasi apo vezvematongerwo enyika vakanyangadza
Youtube movie pasi apa
+ mitemo yezvombo iyo yavakamhanyisa pamheni inomhanyisa ... mune mamwe mazwi, vaive nayo pamashalofu nguva dzose, yaingova ff yakamirira mureza wakaipa.
Hungu, ping-pong pakati pe Freemasonry yatanga uye bastards vanogona kutarisa kuti zvinhu zvose zvinorohwa sei kusvika kune zvikomo zvakakwirira, kana sekuti Kanis aizotaura kana ndinofanira kutaura Tanis 😀 "Uye ipapo ingogogodza"
Uye isu tiri kuona Istanbul kakawanda nzvimbo yepamusoro ... iyo ndiyo yakanga iri chinangwa
Ko Erdogan angagamuchirawo mutungamiri sababamunini Adolf nekuda kwekushandira maitiro kune zvisiri izvo sispects here?
Kana ini ndave ikozvino mberi kwemauto.
Kushivirira Sun isu tichaenda kuzviona.
Iwe unowana izvi here kana uri kunetseka kuita ???
Iye murume iye zvino ane chirongo cheropa here? Ndezvipi zvimwe zvingave zviri. Tongere iwe pachako
« Iko Brenton Harrison Tarrant inorwisa kutanga kwebato rakanaka rekurwisana neTurkey here?
Terrorist kurwisa 24 Oktoberplein muUtrecht, inotyisa munyika yose! »
Total Visits: 11.678.477
President Osama op MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!